အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်မှ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦး | ပြည့်စုံ
အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်မှ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦး
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် ဖို့ဝက်မြို့ အာလင်တန်ဟိုက်စ် အထက်တန်းကျောင်းဟာ ထူးချွန်တဲ့အားကစားသမား မွေးထုတ်ပေးရာမှာ အစဉ်အလာရှိတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်။ အခုလည်းပဲ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦးကို ဘောလုံးအားကစားသမား ကောင်းအဖြစ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။
သူ့နာမည်က မင်းကိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ မွေးဖွားလာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုသန့်ဇင်+မအေးအေးအောင်တို့၏ ဒုတိယသားဖြစ်တယ်။ ကိုမင်းကိုအောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကတည်းက ဘောလုံးကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်ရှောင်တိမ်းလာစဉ် သူဟာ အသက် (၁၅)နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ မိခင်နှင့် အစ်ကိုတစ်ယောက် ညီတစ်ယောက်ကို ခွဲခွာလာတာ အခုအချိန်ထိပြန်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ သူဟာ အာလင်တန် ဟိုက်စ် အထက်တန်းကျောင်းကို စတက်ကတည်းက ဘောလုံးကိုဘဲ ကစားခဲ့တာအခုဆိုရင် စီနီယာအထက်တန်းအသင်းမှာ အားထားရတဲ့ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်အဖြစ်ကစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာလူငယ်များအားကျအတုယူနိုင်ရန်အတွက် ဒီပို့စ်ကို တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုနိုင်ရန် နေ့စဉ်ထုတ် အမေရိကန် Star-Telegram သတင်းစာမှာပါတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
:)...ပထမဆုံး အကြိမ်လာလည် ဖတ်ခြင်းပါ ။
ဒီPost လေးကိုဖတ်ပြီး မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ 
ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မြန်မာမှ မြန်မာပြည်သားလေး
ကမ္ဘာကျော်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလျှက်..:)
ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ :)
အားကျမိပါတယ်... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဘောလုံးကို ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ပါ...
Khinmalaraung,လင်းဦး(စိတ်ပညာ). မသက်ဇင်၊ နှင်းပွင့်လေး၊ တက်လူငယ်၊ မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျနော်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...
ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်နေရာရောက် ဘယ်ဒေသရောက်ရောက် ကမ္ဘာမှာမြန်မာကို လူတိုင်းသိစေချင်တယ်... ကိုယ်စွမ်းနိုင်သလောက် စွမ်းဆောင်ကြပါ... တက်နိုင်သလောက် တက်လှမ်းကြပါ... အနာဂတ်ဟာ လူငယ်တွေလက်ထဲမှာပါ...
ဒီလိုသတင်းမျိုးလေးတွေ ဝေမျှတာ ဖတ်ရသူတွေ အားတက်စရာပါ.
၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲဗျာ။ အဆိုးထဲကအကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင် သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ မချီးကြူးပဲ မနေနိုင်
Also visit my site: the tao of badass